Xuska maalinta haweenka adduunka - BBC Somali
Image caption Maalinta Haweenka Adduunka si weyn ayaa looga xusay
Maanta oo ku beegan maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka, isla markaana ah sanadguuradii boqolaad ee la xuso munaasabaddan ayaa warbixin gaar ah oo Qaramada Midoobay ka soo saartay magaalada Geneva, waxa ay kaga hadleen tacadiyada loo geysto haweenka waxyaabaha sababa iyo cawaaqibkooda, Rashida Manjoo oo warbixinta qortay ayaa ku boorisay dalalka caalamka inay xushmeeyaan, oo ay dhawraan, isla markaana ay fuliyaan xuquuqda haweenka oon kala sooc lahayn.
Meelaha hadaba geeska Afrika laga xusay 8 March waxaa ka mid ah Magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kaleba. Haween ka kala socday xaafadaha Hargeysa iyo ururada haweenka oo ay weheliyaan dumarka shaqeeya , ardada iyo ciidanka muusikada ee boliiska ayaa saaka socod ku maray jidka badhtamaha Hargeysa . Weriyaha BBC-da Axmed saciid Cige ayaa intii damaashaadku socday ku wareystay guddoomiyaha ururka haweenka ee Somaliland, Aniisa nuur Cigaal.
Laakiin si ka duwan magaalooyinka caalamka badankood ayaa maanta magaalada Muqdisho looga xusay maalinta haweenka aduunka, iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka colaadda iyo dagaalada halkaasi ka jira.
Deegaanada Shabaabku ka taliyaana xuska maalintan lamaba soo hadal qaadin, sida uu ku warramay weriyaha BBC Maxamed Ibraahim Macalimu.